Sicirada tartiib-tartiibka ah Tilmaamayaasha Si Aad U Bixisid Dabeecadda Gudbinta adoo ku daraya marti-qaadayaal aad u sarreeya
Xaaladaha yaryar ayaa yareeya goobtaada oo rajeyneysa inay soo uruuriso xogta, kuwaas oo ah mid weyn ama mid xun. Tusaale ahaan, boogta Google ee hareeraha goobaha waa weyn sababtoo ah ujeedooyinka isir-gareynta marka ay ka cabsanayaan xogta (sida farriimaha), taas oo dhexdhexaadinaysa adeeggaaga iyo raadinta dhibaatooyin.
Waa baaritaanka ugu caansan ee khibrad u leh baaritaanka tan iyo markii uusan booqan goobaha. Waxay u gudbineysaa macluumaadka si toos ah koontada Google Analytics iyada oo aan wax xiriir ah la yeelan. Goobaha si aan toos ahayn diiradda loo saarin, markaa ha ka welwelin adoo aaminsan inay tahay goobta aad raadineyso
Igor Gamanenko, Maareeyaha Guusha Macaamiisha Semt , halkan ayuu ku siinayaa xal waxtar leh si looga fogaado spam u gudbinta.
Aqoonsiga Spam gudbinta
Furaha xisaabta Google Analytics iyo hoosta Wax soo iibsiga markaa Dhammaan dhaqdhaqaaqa markaa Dib u soo celinta waxaad si fudud u heli kartaa, kuwaas oo marti-qaadayaashu ay si habboon u gudbinayaan hawsha. Waxaa waajib kugu ah in aad soo qaadato taariikhda dheeraadka ah ee la kordhiyay oo kaliya si aad u hubiso inaad haysato macluumaad kugu filan si aad u aragto wax sharci darro ah. Isku dayga in lagu muujiyo waxyaabo aan caadi ahayn oo cabiraada ah ayaa ka caawin doona tirtiridda macluumaadka aan macquul ahayn
Ka hor inta aan la xallin welwelka koowaad, waxaa jira hal bedel ah oo loo baahan yahay in si joogta ah loo hubiyo xisaab kasta Google Analytics oo ku saabsan saameynta gawaarida galka. Fiiri goobaha oo riix "Checkmarkmark" oo ku taal "Bar dhamaan hits ka soo jiidashada caanaha iyo cayayaanka". Kala duwanaantan ayaa si dabiici ah uga faaiidaysanaysa ilaha macluumaadka ee spam ka soo Google Analytics.
Google Analytics wuxuu leeyahay xulasho Channel oo buuxa oo siinaya awoodda uu ku diidi karo waxqabadka spam mustaqbalka laga helo macluumaadka baaritaanka. Xawilaadaha khatarta ah ayaa laga saarayaa fursadaha ka baxsan ee si isku mid ah loo yareeyo, sidan oo kale oo loo ilaalin lahaa khariidadda ilaha spam ee ka baxsan xadka dheer. Habka ugu fiican ee looga hortago iyaga oo ka muuqda Google Analytics waa in la sameeyo kan oo kaliya ku daraya marti-qaadaha rasmiga ah, hawlgalka dhabta ah ee boggayaga.
Si aad u kala soocdo marti-geliyeyaasha aadka u muhiimka ah u tag ururinta dadka markaa dib-u-habeynta nidaamka. Wakhti dheer oo waqti dheer ah ayaa loo qoondeeyey in uu ordo, sidaa darteed ma seegayso wax macluumaad ah. Adigoo ku dhajinaya cabbiraadda magaca martigaliyaha, waxaad arki doontaa burburinta dhamaan marti-geliyeyaasha, oo ay ku jiraan spam iyo helitaanka kuwa saxda ah ee dhamaystirka macluumaadka..Iyada oo ku xiran cabbirka dhaqdhaqaaqa waxay soo saartaa, waxaad u baahan kartaa inaad ku darto translate.googleusercontent.com macaamiishu waxay muujin karaan adeegyada boggaaga.
Marka laga hadlayo goobta Neuralab, waxaynu ka faa'iideysan karnaa qashin-qaadista inta lagu darayo marti-geliyaha kanaalka.
Iyadoo la adeegsanayo qalabkan, waxaan dhawaanahan u soconnaa in aan ku dhex darno dhaqdhaqaaqa ka socdo ama blog.neuralab.net. Ama www.neuralab.net. Haddii ay dhacdo in aad heshay marti-geliyaal aad u muhiim ah, waxaad ku dari kartaa iyaga oo ku jira qalabka xajmiga, sidaas darteed uma baahnid inaad ku darto mid ka mid ah kan kale. Ka dib markii la ogaado dhammaan marti-geliyayaasha, waa fursad weyn oo ay ugu dhex-geli karaan Mashruucyada.
1. Booqo agagaarka maamulka ee Google Analytics oo kudhiso jidka.
2. Ku dar kan cusub oo magaciisa u sheeg sida loo baahan yahay.
3. Xulo taxanaha habka caadiga ah iyo xulashada (waa in la sameeyaa!).
4. Aqoonsiga martigelinta ee ka hooseeya kanaalka.
5. Under channel, dhejinta artsx ah oo ay ku jiraan hostnames dhabta ah oo dhab ah
6. Fiiri bogga keydinta kaydka, oo aad la socoto Source .